HirShabelle oo ka warbixisay dagaal ka dhacay Jowhar – Hornafrik Media Network
Wasaaradda amniga maamulka Hir-Shabelle ayaa faah-faahin ka bixisay dagaal u dhexeeyey ciidamada dowladda, kuwa AMISOM oo isku dhinac ah iyo Al-Shabaab oo xalay ka dhacay magaalada Jowhar ee xarunta maamulkaasi.
Wasiirka amniga Maxamed Cabdiraxmaan Kheyre oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in dagaalka uu ka dhacay xaafadda Horseed ee magaalada Jowhar.
Sidoo kale wasiirka ayaa tilmaamay in dagaalka uu yimid, kadib markii dagaalyahanno ka tirsan Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen barkoontarool oo ku taalla halkaasi, taas oo uu xusay in lagala socda dhaq dhaqaaqa dadka soo galaya Jowhar.
Maxamed Cabdiraxmaan Kheyre ayaa sidoo kale carabka ku dhuftay in ciidanka amniga ay ka hortageen weerarka, isla markaana uu uga dhaawacmay kaliya hal askari.
“Al-Shabaab ayaa isku dayay iney amaanka qal qal galshaan waxeyna Rasaas Kusoo Tuur Tuureen Bar Fariisan u ah ciidanka amaanka Hirshabelle oo bananka Magalada ah , taasoo laga Kontoroolo Dhaq dhaqaqa dadka soo galo Magalada iyo Dadka kabaxa, kooxahii soo Rabshadeyayna Fariisimahena ciidanka Amniga ayaa ku daba jiro sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa ayuu yiri”. wasiirka amniga ee maamulka Hir-Shabelle.